यस्तो छ पल शाहवि’रुद्धको जाहेरीमा उल्लेख भएको घ’टनाक्रम ! – Nepal Online Khabar
फागुण ११, २०७८ बुधबार 341
काठमाडौं : बुधबार दिउँसो चर्चित अभिनेता पल शाहवि’रुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँमा ज’बर्जस्तीकरण जाहेरी दर्ता भयो । १७ वर्षीया एक बालगायिकाकी बुवाले आफ्नो छोरीलाई करणी गरेको आरोपमा अभिनेता शाहवि’रुद्ध प्रहरीमा जाहेरी दिएपछि यस प्रकरणले रंगिन दुनियाँमा हलचल मच्चायो ।
मिडियादेखि सामाजिक सञ्जालमा पल शाहकै समाचारले प्राथमिकता पाए । एक चर्चित अभिनेता भएका कारण पनि य स प्रकरणले हलचल मच्चिनु स्वभाविकै थियो । यद्यपि, यस प्रकरणले पछिल्लो रंगिन दुनियाँको पर्दाफास पनि गरेको छ ।
बुधबार तनहुँ प्रहरी कार्यालयमा शाहवि’रुद्ध जाहेरी दर्ता भएपछि खास घ’टनाको क्रम खुल्यो । जाहेरीमा उल्लेख भएको घ’टनाक्रमअनुसार घ’टना एक वर्षभन्दा अघि देखिनै घ’टेको देखिन्छ ।
यस्तो छ घ’टना क्रम :
– मिति २०७७/०६/२२ गते (०८/१०/२०२०) मा काठमाडौंमा ‘पिपलु वर’ गीतको म्युजिक भिडियोको सुटिङको क्रममा पहिलो पटक भेटघाट भइ फेसबूक आईडी र फोन नम्बर एकापसमा आदान–प्रदान गरेको ।
– मिति २०७७/१२/३१ गते बागलुङ जिल्लामा आयोजित ‘गलकोट महोत्सव’मा जाँदा प्रतिवादी पूर्ण विक्रम शाह, दुर्गेश थापा, योगेश काजी, सम्राट चौलागाईं, कृष्ण जोशी लगायतका कलाकारसँग एउटै गाडीमा गएको ।
– ‘गलकोट महोत्सव’ सकाएर फर्कने क्रममा बाल गायिका (पी’डित) र प्रतिवादी शाह एउटै सिटमा यात्रा गर्ने क्रममा बाल यौ’न दू’ब्यवहार गरी संवेदनशील अंग चलाउने, जिस्काउने, समात्नेलगायतका कार्य गरेको ।
– मिति २०७८/०१/०२ गते पीडित बालिका काठमाडौंस्थित आफ्नो कोठामा बस्न सुरु गरेकी र प्रतिवादी शाहसँग सामान्य भेटघाट गर्दै आएको ।
– ल’कडाउनको हल्ला चलेपछि पीडित बालिका आफ्नो घर फर्किएकी र त्यसको एक सातापछि प्रतिवादी शाहले ‘सुटिङको लागि पोखरा आउँदै छु, तिमीलाई भेट्छु’ भनी लोखरास्थित लेकसाइडमा बोलाएर भेटघाट गरेको ।
– २०७८/०१/१४ गते साँझ १९ः०० बजे पोखराबाट काठमाडौं फर्कने क्रममा तनहुँको शुक्लागण्डकी नगरपालिका–दुलेगौडास्थित प्रदीप थापाको घरमा ‘विवाह गर्छु, धोका दिन्न’ भन्दै अ’सहमति हुँदाँदै पनि ज’बरजस्ती क’रणी गरेको । (अन्तिमपटक)
– त्यसको भोलिपल्ट ढोर बाराही मन्दिरसमेत घुमाएको र दुलेगौंडाको सुटिङ सकाएरर काठमाडौं फर्किएको ।
– यसअघि मिति २०७७/०९/१० गते पोखरास्थित होटल प्राइम र मिति २०७७/१२/०७ गते चितवनस्थित गैडाकोट रिसोर्टमा पनि ज’बरजस्ती क’रणी गरेको ।
के छ कानुनी सजायको व्यवस्था ?
मुलुकी अ’पराध संहिता २०७४ को दफा २१९ अनुसार कुनै महिलाको मञ्जुरीबिना वा १८ वर्षभन्दा मुनिको बालिकालाई क’रणी गरेमा निजले त्यस्तो महिला वा बालिकालाई ज’बर्जस्तीकरणी गरेको मानिनेछ । उपदफा ३ मा करणी गर्दाको परिस्थिति र महिलाको उमेर हेरेर स’जाय तोकिएको छ ।
उपदफा ३ (क) मा १० वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिका, पूर्ण अशक्त, अपाङ्गता भएका वा सत्तरी वर्षभन्दा माथिको महिलामाथि क’रणी भए जन्मकैद हुने भनिएको छ ।
उपदफा ३ (ख) अनुसार दश वर्ष वा १० वर्षभन्दा बढी, १४ वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिका भए १८ देखि २० वर्षसम्म कैद स’जाय हुनेछ ।
उपदफा ३ (ग) अनुसार १४ वर्ष वा १४ वर्षभन्दा बढी, १६ वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिका भए १२ देखि १४ वर्षसम्म कै’द हुने व्यवस्था रहेको छ ।
उपदफा ३ (घ) अनुसार १६ वर्ष वा १६ वर्षभन्दा बढी, १८ वर्षभन्दा कम उमेरकी महिला भए १० वर्षदेखि १२ वर्षसम्म कै’द स’जाय हुने व्यवस्था रहेको छ ।
उपदफा ३ (ङ) अनुसार १८ वर्ष वा १८ वर्षभन्दा बढी उमेरकी महिला भए ७ देखि १० वर्षसम्म कैद स’जाय हुने व्यवस्था रहेको छ ।
पी’डित बालिकाकी बुवाले दिएको जाहेरी अनुसार पी’डितको उमेर १६ वर्ष रहेको छ । यसअनुसार पी’डकलाई १० देखि १२ वर्षको कै’द स’जाय हुने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।
Prevरहेनन् कलाकार जयनन्द लामा !
Nextएमसीसीको वि’रोधमा माओवादी निकट अखिल क्रा’न्तिकारीले निकाल्यो म’साल जु’लुस !
“अब राप्रपालाई कसैले रोक्न सक्दैन” :- अध्यक्ष लिङ्देन !